Sida loo furo feylka .ZIP ee la socda codsiga Qoraalada | Wararka IPhone
Daalacashada IOS, hal dhinac Safari iyo dhanka kale Google Chrome, inta badan waa ka waxtar yar yihiin inta aan fileyno shaqooyin badan. Dhawaan isticmaaleyaasha qaarkood waxay heleen muuqaal cusub oo ka mid ah codsiyada macruufka ah ee 'Notes Notes' oo aad waxtar u yeelan kara mararka qaarkood Waxaan ka hadleynaa suurtagalnimada in lagu furo feylasha qaab isku dhegan .ZIP si toos ah uga socda Qoraalada. Tani waa mid ka mid ah astaamaha cusub ee qoraallada ku jira macruufka 9.3, awoodda lagu abuurayo qoraallo cusub oo laga soo qaadan karo liistada hoos-u-dhaca ee Safari iyo Maps iyo barnaamijyada kale. Waxaan si dhakhso leh oo fudud kuu bari doonnaa sida loo furo faylasha .ZIP-ka iPhone-gaaga iyo iPad-kaaga dhib la'aan.
1 Sidee loo furaa faylka .ZIP ee leh Ogeysiiska Apple?
2 Waxyaabaha ku habboon ee ku jira gudaha .ZIP
3 Mail iyo iCloud Drive sidoo kale waxay furaan qaabka .ZIP
Sidee loo furaa faylka .ZIP ee leh Ogeysiiska Apple?
Ugu horreyntii, waa inaan ka helno isku xirka shabakadda Safari tusaale ahaan. Waxaan ku xusuusineynaa inay tani u adeegi doonto oo kaliya in la furo feylal iswaafajin kara, tusaale ahaan feylasha qoraalka qaab Word ama sawirro ah, nooc kasta oo soo-galin ah oo uu aqbalo dalabka Notes iyo waxyaabaha ka dhasha.
Marka aan ku xirno qadka, waxaan isticmaali doonaa shaqada «Ka fur ..»Waxaa laga heli karaa geeska bidix ee sare ee Safari faylasha aan arjigu kaligiis furi karin. Sidoo kale, Xusuusin ayaa u muuqan doonta asal ahaan midka ugu horreeya ee macnaha guud ee macnaha guud, haddii aysan muuqan waxaan aadi doonnaa "wax badan" si aan u dhaqaajino furaha ogeysiiska.
Pop Up yar oo u heellan ayaa soo bixi doona, oo leh isla interface sida codsiga Notes laftiisa taasina waxay noo oggolaan doontaa inaan si dhakhso leh uga sameysano qoraal ka kooban waxyaabahaas aan ku xusnay Safari.
Halkaas waxaan si fudud uga abuuri doonnaa qoraal leh tusmada la tilmaamay. Hadda waxaan u tagi doonnaa codsiga Notes-ka iPhone-keena si aan u helno Xusuus-qorista ugu horreysa ee ku jirta liiska aan go'aansanay inaan ku darno oo runtii ku jira faylka .ZIP, midka aan fureyno. Marka qoraalka la helo, waxaan si fudud u gujineynaa sanduuqa yar ee tilmaamaya in qoraalka uu ku lifaaqan yahay faylka'ZIP 'isla markaana uu si toos ah u furi doono.
Hadday sawir tahay ama qoraal dukumeenti ah, isla markiiba wuu furi doonaa, wax aad u faa'iido badan, tusaale ahaan, codsiyo badan oo jaamacadeed, macallimiin badan ayaa geliya faylal dhammaystiran oo ku jira qaabka .ZIP sababo la xiriira baahiyaha shabakadaha qaarkood. Tan awgeed, mar dambe kama heli doonno nafteenna xadidnaan inaan helno ama dirno dukumiintiyo qaab isku duuban .ZIP ku jira aaladaha iOS. Shaki la'aan, tani waxay leedahay codsiyo badan oo wax ku ool ah, gaar ahaan kuwa isticmaala kuwaas oo iPad-ku u yahay qalab kale qalabaynta xafiiska, labadaba arday iyo heer shaqo, maadaama qaabka .ZIP uu aad ugu baahsan yahay dhammaan meelaha. Xaqiiqdii, Windows iyo Mac OS waxay noo ogolaanayaan inaan si toos ah u furno iskuna cadaadinno feylasha qaab .ZIP dhib la'aan dhib badan, taas oo ka dhigaysa heer aan ka heli doonno meel walba.
Waxyaabaha ku habboon ee ku jira gudaha .ZIP
.jpg, .tiff, .gif (Sawir)
.doc iyo .docx (Microsoft Word)
.htm iyo .html (Websaydh)
.key (Muhiim ah)
.ppt iyo .pptx (Microsoft PowerPoint)
.rtf (Qoraal hodan ah)
.xls iyo .xlsx (Microsoft Excel)
Mail iyo iCloud Drive sidoo kale waxay furaan qaabka .ZIP
Waxaan dooranay codsiga Notes-ka maxaa yeelay waxay noogu muuqataa midka ugu wax ku oolka badan, laakiin ma ahan midka kaliya, iCloud Drive iyo iOS Mail sidoo kale waxay leeyihiin suurtagalnimada in la furo feylasha la isugeeyey ee qaabkan caadiga ah. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan si fudud u dirno una helno noocyada qaababkan labada codsi, taas oo ahayd tallaabo hore loo qaaday marka loo eego kala duwanaanshaha macruufka, nidaam aan caan ku ahayn sababtaa awgeed. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo furo feylka .ZIP ee arjiyada qoraallada
Leo´s Fortune hadda wuxuu marayaa kaliya 0,99 Run fool!